प्रियंकाको विकिनीमा नयाँ अवतार ! – An Online Entertainment News Portal
HomeGossipप्रियंकाको विकिनीमा नयाँ अवतार !
September 19, 2018 Tulasa Karki Gossip, News 0
बलिउड देखि लिएर अहिले कलिउडमा पनि चर्चामा आउनको लागि प्रयोग हुने अस्त्र हो विकिनी अवातार । कलिउडका केहि नायिकाहरु अहिले हिट हुनको लागी विकिनीमा फोटो खिचाउन थालेका छन् । यसै क्रममा अहिले नायिका प्रियंका कार्की पुन विकिनी अवतारमा आएकी छिन ।
उनले हिजो आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा स्विमिंग पुलमा विकिनीमा खिचिएको फोटो शेयर गरेकी छिन । जसमा उनि निकै हट पनि देखिएकी छिन् ।प्रियंकाको अंग प्रर्दशन यो पहिलो पटक भने हैन । उनले पहिला पनि यस्ता धेरै खाल्का फोटोहरु शेयर गरिसकेकी छिन र अहिले उनको यस्ता विकिनी अवतारमा दर्शकहरुले खासै चासो पनि देखाउन छाडेका छन् ।
प्रियंका अहिले सर्वाधिक चलेकी नायिका अन्तर्गत पर्द्छिन भने उनि प्राय हरेक फिल्महरुमा देखिने गर्छिन चाहे त्यहाँ सानो भन्दा सानो रोलनै किन नहोस।
नेपालको अवार्ड पाउने र दिनेलाई बाहेक अरुलाई छैन मत्तलव